७० करोडको अडियो प्रकरणबाट ध्यान मोड्न नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र : कांग्रेस प्रवक्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्वतमान सञ्‍चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणको ध्यान अन्यत्र मोड्न सरकारले नेपाल ट्रेस्टको श्वेतपत्र जारी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार साँझ प्रवक्ता शर्माले ट्वीट गर्दै अडियो प्रकरणबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र जारी गरेको बताएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्,'धर्मपुत्रको ७० करोडबाट ध्यान मोड्ने प्रयत्न,अर्थात नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र ! '
यस्तै उनले श्वतेपत्रमा प्रायोजित रुपमा निकालिएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्,'श्वेतपत्रको `शास्त्र´ पालना नगरी निर्माण गरिएको दुब्लो अस्त्र । कुनै नाम जानेर छोड्ने कुनै हिसाब गरेर जोड्ने । गोकर्णको मुद्दा जो समेत माथि,जारी उहाँबाटै ।'
यस्तै उनले सरकारलाई आफ्नो शिरमा मुद्दा आफैं न्यायाधीश ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ २०:०६
काठमाडौँ — उनलाई फेसबुकमा एक अपरिचितको ‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट’ आयो । सहजै ‘एसेप्ट’ गरिन् । मेसेन्जरमा कुराकानी हुन थाल्यो । दिन प्रतिदिनको कुराकानीले उनीहरू नजिकिए ।
सुनसरी इटहरीकी घर भएकी उनी जागिरको खोजीमा थिइन् । ३४ वर्षीया उनलाई फेसबुकमार्फत् चिनजानका साथीले आकर्षक जागिरको प्रलोभन देखाए । प्लेनको टिकटसमेत मिलाइ दिए । जागिरको आशामा उनी काठमाडौं ओर्लिइन् । जब उनी काठमाडौं झरिन्, सामूहिक बलात्कारको सिकार भइन् ।
सामूहिक बलात्कारको आरोपमा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले दुई दाजुभाईलाई पक्राउ गरेको छ । वृत्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्सालका अनुसार बलात्कारको अभियोगमा झापा गौरीगन्ज–१ घर भइ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–६ हात्तिगौंडा बस्ने ३५ वर्षीय सुवास संग्रौला र उनका भाइ ३३ वर्षीय विशाल संग्रौला पक्राउ परेका छन् ।
उनीहरूले ती महिलालाई बुढालिनकण्ठ नगरपालिका–६ गणेश चोकस्थित सुवास संग्रौलाको घरमा र भक्तपुरको एक रिसोर्टमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको प्रारम्भीक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक लम्सालले बताए ।
पक्राउ परेका संग्रौला दाजुभाईलाई प्रहरीले जबर्जस्ती करणी अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ । पीडित महिलालाई भने एक सामाजिक संस्थामा आश्रय दिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ १९:३१